10/08/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Rock and folk entin’i Nini, Mahery ary Poon
Mpanakanto samy manana ny mozika voiziny nefa atambatry ny aingam-panahy iraisana. Hampiantrano ny « Rock and folk » iarahana amin’i Nini (tarika Kiaka), Mahery (tarika Johary) ary Poun (Tarika Green) ny Piment Café Behoririka, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Araka ny anarany dia amin’ny endrika Rock sy Folk no hiangalian’izy ireo ireo hira samihafa nanana ny lazany isaka ny vanim-potoana samihafa. Anisan’ny nahafantarana azy ireo ny « Aza dia miniana » an’i Vola sy Noro.
Bel Air Café – Talatamaty
Hampiaraka talenta i Luk, Lilie ary Jovin
Toko telo mahamasa-nahandro ihany koa no hiara-dia eny amin’ny Bel Air Café Talatamaty, anio alina manomboka amin’ny 9 ora alina. Amin’ny fiarahana mpanakanto avy amin’ny sehatra sy tarika samihafa toa izao, dia mivelatra amin’ny karazan-kira sy gadona isan-karazany ny fampisehoana. Anisan’ireo manana feo miavaka sy mahatakatra naoty avo i Luk, ary mahay mampiara-peo aminy hatrany i Lilie. Tsy zoviana amin’ny fahaizany mifehy ny karazana gadona rehetra amin’ny fitendrena gitara ihany koa i Jovin.
Fill’in – Antsakaviro
Hiverina ireo zokiben’ny Rap
Na tsy re firy intsony aza, dia mbola manana ny lazany ary hiverina an-tsehatra etsy amin’ny Fill’in Antsakaviro ireo zokiben’ny mpanao Rap eto Madagasikara. Manomboka amin’ny 8 ora alina dia hifandimby sy hifanohana eny an-tsehatra ry Doublenn, Buddha Eltaga. Hanakoako etsy Antsakaviro araka izany ireo hira nampalaza ireo tarika ireo toa ny « Tia anao izy », « raozy », « Ditsoka »…
Hiaka-dapa ireo vazo avy any Toliara
Mpanakanto roa samy avy any amin’ny faritanin’i Toliara no hiaka-dapa sy hanafana ny sehatry ny jao’s Pub anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Mamada na Masikoro Manan-danja no voalohany amin’izany. Ity mpanakanto ity izay mivoy ny gadona tsapiky ary fantatry ny rehetra tamin’ilay hira « Moramora avao », « Mamadiky », « RN9 »… Ao anatin’izay gadona tsapiky izay ihany koa no gadona voizin’i Nazya. Ity farany izay manandratra ny kolontsaina avy any Atsimo ary nahafantarana azy ilay hira « Tsy hanambaliako tsapiky Toliara ».
Kudeta Urban Club – Anosy
Tamberina hiarahana amin’i Tovo J’hay
Mpanakanto iray mivoy ireo hiran’ny fo i Tovo J’hay. Hitondra ny « Tamberina » etsy amin’ny Kudeta Urban Club etsy Anosy izy rahampitso alina manomboka amin’ny 8 ora sy sasany. Mandritra izany seho izany no hitondrany an-tsehatra ireo hira rehetra nahafantarana azy ka nahalalan’ny maro azy raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Tampoka avy teo », « Teny mamy », « Angolanao », « Zoma »…